Golaha Aqalka Sare oo la kulmay wafdi ka socda Midowga Yurub – XOGMAAL.COM
Golaha Aqalka Sare oo la kulmay wafdi ka socda Midowga Yurub
Cabdi Xaashi C/laahi Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ayaa shir guddoomiyay kulankaa oo looga hadlay sidii shuruucda iyo horumarinta looga taageeri lahaa Golahiisa.
By Soomaaliya	 On Oct 15, 2018
Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare iyo Guddiga joogtada ah ee Golaha ayaa si wadajir ah xarunta Golaha ugu qaabilay Wafdi ka socday Midowga Yurub oo uu hoggaaminayey Mr Stefano Manservisi agaasimaha Guud ee Iskaashiga Caalamiga iyo Horumarinta Midowga Yurub.
Mr. Stefano Manservisi Agaasimaha Guud ee Iskaashiga Caalamiga iyo Horumarinta Midowga Yurub ayaa ammaanay horumarka dalka ka socda gaar ahaan dadaalada xubnaha Aqalka sare ee ku aadan dastuurka dalka.
Agaasime Mr. Stefano Manservisi ayaa yiri “Waan ku faraxsanahay dadaalada ay wadaan Aqalka sare, waxaan saaxiib dhow la nahay Soomaaliya, madaxdeeda guud ahaan iyo Dowladda dhexe, waxaana gacan ka siineynaa guud ahaan dadaalada ay wadaan”.
Cabdi Xaashi C/laahi Guddoomiyaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Midowga Yurub uga mahadceliyay dowrka ay ka qaadanayaan dib u dhiska iyo horumarka Soomaaliya.
Cabdi Xaashi C/ayaa yiri “Waxay nagala hadleen xaaladda hadda jirta, waxayna keeneen dalka lacag kaalmo ah oo gaareysa boqol Milyan, waxaana kale oo ay nagala hadleen dib u heshiisiinta aynu wadno, taanna waxaa weeye warbixin yar beynu ka siinay iney noo socoto, arrimahaasi ayaan ka wada hadalnay”.
Soomaaliya oo ka qeyb galeysa shir looga hadlayo iskaashiga Tamarta iyo Biyaha
Kal-fadhiga Afaraad ee Golaha Aqalka Sare oo ka furmaya Muqdisho